စားဖိုဆောင် ချစ်သူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စားဖိုဆောင် ချစ်သူ
- Sine Sant
Posted by Sine Sant on Jul 27, 2014 in Creative Writing | 28 comments
ကျမ ဘ၀ဟာ ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀တစ်ထပ်တည်းကျ ခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ 
အပျိုဖော် ၀င်လာစက တည်းက ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်နေရတာ ကိုသဘောကျ နှစ်သက်ခဲ့ တယ် ။ မချက်တတ် ချက်တတ်နဲ့ ကျမ ရဲ့ မိသားစုကို
ထမင်းဟင်း ချက်ကျွေး ခဲ့ဖူးတယ် ။
အမေ နဲ့ အစ်မချက်တဲ့ ဟင်းချက်နည်းတွေကို
လေ့လာခဲ့တယ် ။ ချက်ပြုတ်နည်းစာအုပ်တွေ ၀ယ်ဖတ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ချက် ကြည့်တဲ့အထိ အရူးထခဲ့သေးတယ် ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လက်တည့်စမ်း ထားတဲ့ဟင်းတွေကို မိသားစုထမင်းဝိုင်း မှာ ချကျွေး တဲ့အခါ ဆို တစ်ယောက်တစ်
ပေါက် ၀ိုင်းဝေဖန်ပေးတဲ့ အစ်ကိုနဲ့ အစ်မ တွေကြောင့် စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် ခဲ့ တာကို သတိရသေးတယ် ။ မီးဖိုချောင်ထဲ ၀င်ပြီး ချက်ပြုတ် နေရတာကို မိန်းကလေး ပီပိ ၀ါသနာ ကြီးခဲ့တယ် ။
အခုတော့ ကျမ ဟာ စက်ရုံဝန်ထမ်း အယောက် သုံးရာ လောက်ကို ချက်ပြုတ်ကျွေး မွေးရတဲ့ စားဖို မှူး တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ ။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်က
မှစားဖိုဆောင်တစ်ခုလုံးကို တာဝန်ယူ ရတဲ့ စားဖိုဌာနမှူး ရာထူးကို ရခဲ့တာပါ ။
ကျမ လက်အောက်က အကူစားဖို မှူး ရှစ်ယောက်ရှိပါတယ် ။
၀န်ထမ်းသုံးရာ ကျော် လောက်ကို မနက် ၊ နေ့ လည် ၊ ည တစ်နေ့ ကို သုံးနပ်
ချက်ကျွေး ရတာ ဆိုတော့ လွယ်တဲ့ ကိစ္စ တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ။ ဆယ်ပြည်လောက်ဆံ့ တဲ့ ထမင်းပေါင်းအိုး လေးအိုးလောက်ကို တပြိုင်တည်း ချက် ရပါတယ် ။
စက်ရုံက ချမှတ်ပေးထားတဲ့ စားဖိုအသုံး စရိတ် နဲ့ လောက်အောင် ဝေခြမ်း သုံး
စွဲရပါတယ် ။ တစ်နေ့ လုံးစာကို တစ်မနက်တည်းမှာ အားလုံးပေါင်းပြီး ဈေးထဲ
မှာဖောက်သည်ဈေးနဲ့ပေးဝယ် ရတယ် ။ တစ်နေ့ လုံးစာအတွက် ဈေးဖိုး က
နှစ်သုံး ကျော်လောက်ကုန်ပါတယ် ။ ဒါတောင် အသားကျွေးတဲ့ နေ့ ကို တစ်ပတ်
မှာ သုံး ရက်သတ်မှတ် ပေးထားတာပါ ။ ကျန်တဲ့ ရက်တွေမှာတော့ ကြက်ဥ တို့ 
အသီးအရွက်တွေကို သင့်သင့်မျှတ စွာချက်ကျွေး ရပါတယ် ။
စားဖိုဆောင်ချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျမချက်ကျွေး တဲ့အစားအသောက်
တွေ ကျေကျေနပ်နပ် နဲ့ အရသာ ရှိရှိ စားသောက်နေတာကို မြင်နေရ ရင် အရမ်း
ကိုစိတ်ချမ်းသာမိပါတယ် ။ စေတနာ ရှိရှိ ချက်ပြုတ်ပေး ခဲ့တဲ့အတွက် အားပါးတရ
စားသောက်နေကြတာကို တွေ့ ရရင် မောခဲ့ ပင်ပမ်းခဲ့ ရသမျှ အမောပြေ ကျေနပ်
ပီတိ ဖြစ်ရတယ် ။
တစ်ခါတစ်လေ စက်ရုံ ကလုပ်ငန်း မပြေလည်တဲ့ အခါတွေမှာ စားဖိုစရိတ်ကို
အနည်းဆုံး နဲ့ လောက်ငှ အောင်သုံးရပါတယ် ။ အဲ့ဒီ အချိန်တွေဆိုရင် အသီးအရွက် တွေကို အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပေး ရပါတယ် ။ အသား
ဟင်း မပါ ရင် တောင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ မျက်နှာ ကမသာယာ တတ်ပါဘူး ။ ချက်ပြုတ်
ပေးရတဲ့ ကျမ တို့ လည်းစိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ် ။ ကျမတို့ ဘက်ကတော့
တာဝန် ရော စေတနာ ရော ပေါင်းစပ်ပြီးမှအတတ်နိုင် ဆုံး ချက်ပေးခဲ့ပါတယ် ။
ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားတွေကို တည်ခင်း ထားပြီး ထမင်းစားချိန်မှာ ရောက်
လာကြမယ့်ဝန် ထမ်းတွေကို စောင့်မျှော် နေရတယ် ။ သူတို့ တွေ စားသောက်နေ
တာကိုလည်း တစ်နေရာကနေ စောင့်ကြည့် ရပြန်ပါတယ် ။ စားသောက်ပြီး ထွက်
ပေါ်လာမယ့် စကားသံတွေ ကိုမသိမသာ နားစွန့် ရပြန်ပါတယ် ။ သူတို့ မျက်နှာ
အခြေအနေ ကိုလည်းလေ့လာအကဲခက် ရတယ် ။ တခါတလေ ကျမတို့ ကိုယ် တိုင် မတတ်နိုင် မဖြေရှင်ပေးနိုင် တဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေကို လည်း တီးတိုးတီးတိုး
ပြောနေတတ်ကြ ပြန်ပါတယ် ။ စားသုံးသူတွေအတွက် ကျမဖြေရှင်းပေးနိုင် တာ
ဆိုလို့ တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံး ချက်ပြုတ်ပေးဖို့ တစ်ခုပဲ တတ်နိုင်တာပါ ။
ကျန်တာကတော့ စက်ရုံရဲ့ တာဝန် ရှိသူတွေမှ ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ ။
စက်ရုံကရာထူးရတဲ့ လူကြီးတွေရဲ့ စားသောက်ပြီး သားပန်းကန် တွေကို ကျမ
တို့ စားဖိုဆောင်က ၀န်ထမ်းတွေကဆေးကြောပေးရပြီး၊ ရာထူးမရှိတဲ့ရိုးရိုး ၀န်ထမ်းတွေကတော့ သူတို့ ပန်းကန်ကိုသူတို့ ဆေးရပါတယ် ။ ထမင်းဟင်းတွေကို
အစောကြီးချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့ အချိန်တွေဆို ထမင်းလာစားမယ့် သူတွေကို ပျင်းရိ
စွာထိုင်စောင့်နေမိတယ် ။ ကိုယ့် ချစ်သူကိုတောင် အဲ့လို တစ်ခါမှ ထိုင်မစောင့်
ဖူးဘူး ။ ထမင်းစားချိန်ခေါင်းလောင်း ထိုးပြီးတာတောင် တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ ရောက်လာတတ်တာကို မျှော်နေရတာ လည်းကိုယ့် ချစ်သူကိုမျှော်
နေရသလို ပဲ စိတ်မောနေမိတတ်တယ် ။
တခါတလေတော့ စောစော စီးစီး အနားယူချင်တယ်လေ ။ စားသောက်တဲ့သူတွေရှိနေသရွေ့ ကျမ တို့ အနားယူချင်လို့ လည်းမနားရဘူး ။ တချို့ ကျတော့ အလုပ်မပြီးသေးတာကိုအကြောင်းပြပြီး ထမင်းစားချိန်ကျော်မှ လာတဲ့သူလည်း ရှိသေးတယ် ။ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းပဲ စားသောက် ရမယ်ဆိုပြီး စည်းကမ်းချက်တွေထုတ်ထား ပေမယ့်တချို့ လူတွေကျတော့မသိချင်ယောင်
ဆောင်ပြီး လာစားနေကြတယ် ။
အချိန်မှာစည်းကမ်းတကျတော့ လာစားစေချင်တယ် လေ ။ ကျမ တို့ ကတောင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာစားနိုင်အောင် ချက်ပြုတ်ထားခဲ့ပေးတာပဲ ။ အနားယူရမယ့်အချိန်တွေ မှာတော့အပြည့်အ၀နားလိုက်ချင်ပါတယ် ။ မနက် လေးနာရီ ကတည်းက ချက်ပြုတ်လိုက်တာ ညနေ ခုနှစ်နာရီ အထိ
ဆိုတော့ အရမ်းပင်ပမ်းပါတယ် ။ စည်းကမ်းကို မလေးစားတဲ့အပြင် ကိုယ်ချင်းစာ
စိတ်တွေပါ ပျောက်နေတော့ တခါတလေ စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့ မိပါတယ် ။
ဒါပေမယ့်ပေါ့ ကုသိုလ်လည်းရ ၀မ်းလည်းဝတဲ့ အလုပ် လို့ ခံယူထားတဲ့အတွက်
ရော ကိုယ်တိုင် ကလည်း ချက်ပြုတ်ဝါသနာ ပါနေလို့ သံယောဇဉ်တွေ တွယ်မိပြန်
၀န်ထမ်းသုံးရာလောက်မှာ မှတ်မှတ်ရရ နဲ့ ကျမသတိထားမိတဲ့ မိန်းကလေး
တစ်ယောက်ရှိတယ် ။ ဟင်းကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း ထမင်းစားပြီးတိုင်း အပြုံးမပျက် ပြောနေကျစကား တစ်ခွန်းက ” အရမ်းစားကောင်းတယ် အစ်မ ဗိုက်ကို တင်းသွားတာပဲ ” ဆိုပြီး ။ ဘယ်ဟင်းနဲ့ တော့ဘယ်လိုစားလိုက်တယ်ဆို
ပြီး ရယ်မောပြီးပြောပြတတ်ပါတယ် ။ အစတုန်းကတော့ သူ ကျမ ကိုခနဲ့ တာလား
လို့ ထင်ခဲ့မိတယ် နောက်တော့ကျမထင် သလို မဟုတ်ခဲ့ ပါဘူး ။ တနေ့ တနေ့ သူ့ 
ရဲ့ အားပေးစကား ၊ စားဖိုမှူးတွေ အပေါ်မှာ နားလည်စာနာတတ်တဲ့ သူစိတ်ထား
လေးတွေကြောင့် ကျမ အမောပြေခဲ့ ရပေါင်းလည်းများပါပြီ ။
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ တွေရဲ့ ကြားထဲမှာ ကျမ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခွင့် ရတာကိုပဲ လောကကြီးမှာ
နေပျော် ပါပြီ ။ ကျမဟာ စားဖိုဆောင် ကိုအသက်ထက်ဆုံး ချစ်မြတ်နိုး သွားမယ် စားဖိုဆောင် ချစ်သူ ပါ ။ ။
27 .7.2014 / Sunday .
About Sine Sant
Sine Sant has written 23 post in this Website..
View all posts by Sine Sant →
အိုးလေ လှုပ်ပါ။ ရေအိုး လေး လှုပ်ပါဟေ့။
ပျော်လိုက်တာ။ နောက်ထပ် စာဖိုမှူးတစ်ယောက် ထပ်ရပြီ။
အိုးကြီးချက် ၇ မျိုးလောက် လိုချင်ပါကြောင်းးးး
(ဒါ လာ ဓားမြတိုက်တာနော်။ မပေးရင် ဓားစာခံ ခေါ်သွားမှာ)
အယ် , ?., ? ,.
မဂျီး ရေ အိုးကြီးချက်တော့မနိုင် ဘူး ဟီးဟီးးး
စားဖို ဆောင် ချစ်သူ ကတော့ အမှန်ပဲ
ချက်ပြုတ်ကြော်လှော် လာထား တူးသွားရင်တော့ လုလု မဟုတ်ဘူးနော်
ကျနော်ချစ်တဲ့..ဒေါ်ဖွားမေတို့ … ဖွေးဖွေးတို့ … ၀တ်မှုန်ရွှေရည်တို့ ကို… စားဖိုဆောင်ချစ်သူဖြစ်စေချင်သူပါ ။
ဘာလို့ လဲ..ဆိုတော့… အစားကောင်း ချက်ကျွေးမယ့်သူရှိမှ… စားရမယ့်…
အစားကောင်းကြိုက်သော..ကိုလူချော မို့ ပါ.. ။
ကိုလိပ်ကြီးးးး ဟိုမှာ ဒေါ်ဖွားမေ ခေါ်နေပြီ
ယောက်မခါး ထိုး ပြီးးး ရွာထဲချည်း လည်မနေနဲ့ 
သွားဘူးးး ဒီမှာ.. .ဖွေးဖွေးနဲ့ …ချက်နေတယ်.. ။
အတော် စေတနာ ကောင်းတဲ့ စားဖိုမှူးပဲ …
ဝါသနာ လည်းပါ၊ စေတနာပါ ကာထားလေတော့ကာ …
ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် ချစ်စရာလေး ဖြစ်နေမှာ …..
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်စိတ်ဝင် စားရာ ဝါသနာပါရာ ကို ရွေးပြီး လုပ်နိုင်ခဲ့တာ အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် လုလု ရေ။
နောက်တစ်ချက် က တော့ ကိုယ့် အလုပ် ကို တန်ဖိုးထားပြီး စေတနာ နဲ့ လုပ်နေတာကို ပိုပြီး ဂုဏ်ယူပါတယ်။ :-))
မြန်မာပြည် ၊ ပြောရရင် ဒီ အာရှ (ဂျပန်မပါ) နိုင်ငံတွေ က လူများ မှာ တစ်ခုခု ရပြီးရင် “ကျေးဇူး” ဆိုတာ ကို ပြောဖို့ အတော်ဝန်လေးကြတယ် ထင်ရဲ့။
ပြောရကောင်းမှန်း မသိတာမှာ လူ့တန်ဖိုး ဆိုတာ ကို အလေးမပေးတတ်တာလဲ ပါမယ်။
အနောက် က နေ အရှေ့ ကို ခရီး သွားချိန် ပိုပြီး ထင်ရှားတယ်။
ဥပမာ – အနောက်ဘက်တိုင်းမှာ ဓာတ်လှေခါး ကို ခလုပ်နှိပ်ပေးလိုက်လဲ ဘေးက နေ ကျေးဇူး သံ တွေ ဝေဝေဆာဆာ။
လေယာဉ်ပေါ်မှာလဲ လေယာဉ်မယ် တွေ ဆီက ဘာ ရရ ကျေးဇူး ပြောလိုက်ဖို့ ဝန်မလေး။
စိတ်ထဲက ကို စိတ်ပါလက်ပါ ပြောကြတာနော်။
အရှေ့တိုင်း ရောက်တော့ မျက်နှာသေကြီး တွေ ကြီးဘဲ။
Service ကို ဝယ် သူတွေ ကလဲ နင်တို့ ကို ပိုက်ဆံပေးထားတာ။ လုပ် ရမှာပေါ့။ ကျေးဇူးတင်စရာ မလို ဆိုတဲ့ စိတ် နဲ့။
Service ပေးသူ တွေ ကလဲ ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ရင်ပြီးရော၊ ဘာမှ အပို စေတနာ မပါချင်ကြ။
အမှန်တော့ လဲ အညမည သဘော ဆိုတာ သိပ်မှန်တာဘဲ။ :-)))
လုလု ရေ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် စေတနာ အပျက် ဘဲ အပြုံး ဆက်ထားပါ။
တဖြေးဖြေးချင်း မှာတော့ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ပြန်ပြုံး ပြ လာပါလိမ့်မယ်။
မဟုတ်လဲ ကိုယ့်မျက်နှာ အကြောရော့တာ အမြတ်ပေါ့။ lol:-)))
ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်စေတနာပါ မှ ပိုအောင်မြင်တိုးတက်
တာပါ ဆန္ဒ နဲ့ ဘဝတစ်ထပ်တည်းကျ ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး
ဒါမဲ့ ဒီစာထဲက စာဖိုမှူးက တော့ လုလု မဟုတ်ပါဘူး တကယ်အပြင်မှာတော့ရှိပါ
တယ် အဲ့ဒီစားဖိုမှူး အစ်မ နဲ့ ရင်းနှီးလို့ သူ ပြောပြတာကို ရေးခဲ့တာပါ
ကိုယ်တိုင် လည်းမြင်တွေ့ နေရတဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုတော့
အဲ့အစ်မ ကတကယ်စေတနာကောင်းပါတယ် စိတ်ထားကောင်း
လို့ စာဖိုမှူးရာထူးကို ရထားတဲ့သူပါ ဒီပို့ စ်က အဲ့အစ်မ ကိုဂုဏ်ပြု
ချင် လို့ ရေးလိုက်တာပါ
ကျေးဇူးအများကြီးတင် ပါတယ် ဆက်ကြိုးစားပါဦးမယ်
အမှန်တော့ မြန်မာပြည်မှာ (မြန်မာပြည်မှာ) အဲ့ဒီ့ အလုပ်က တစ်ကယ် မလွယ်တဲ့ အလုပ် ပါ …
လုပ်ရတာ ပျော်တယ် ဆိုရင်တော့ ချီးကျူးပါတယ် ..
ဟုတ်ပါတယ် တကယ်မလွယ်တဲ့အလုပ် က အခုတကယ်ရှိပါတယ်
ချက်ပြုတ်ရတာကိုဝါသနာပါ တယ် ပျော်ပါတယ် ဒါမဲ့ ဒီစာထဲက စာဖိုမှူးက လည်းလုလု မဟုတ်ပါဘူး တကယ်အပြင်မှာတော့ရှိပါ
ကိုယ်တိုင် လည်းမြင်တွေ့ နေရတဲ့ဘဝတစ်ခုပါ
ဒါဆိုရင်စားဖိုမှူးကိုပြုံးပြပြီးအားပေစကားပြောတာ…lu lu ဘဲဖြစ်ရမယ်..
ကိုယ့်ရဲ့ အပြုံးနဲ့ အားပေးစကားက တဖက်လူ အတွက်
ရွာထဲ ရသစာပေ အားကောင်းလာမယ့် သဘောပေါ့ညော်..
သုတ ရသစာပေ တွေရွာထဲမှာ တိုးပွားလာစေချင် ပါတယ်
ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်တယ် သူများကိုလည်းဖတ်စေချင် ပါတယ်
ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ရွာထဲဝင် လာရတဲ့အချိန်မှာ အကျိုးရှိတာလေးတွေ
ဖတ်လိုက်ရရင် ဝင် ရကျိုးနပ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်
အခုလိုဝင် ရောက်ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် လည်းကျေးဇူးတင် ပါတယ်
တာင်ကြီး လုလု ကိုဆားချဉ်လိုက်တာကွယ်။
ဒါက ခုခေတ်ဆို သိပ်ပြီး လူတိုင်းမှာ ပါလာတဲ့ ၀ါသနာမဟုတ်ဘူး။ ခုလို ၀ါသနာကလည်း နယ်နယ်ရရတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ အတော် ချီးကျူးးစရာကောင်းပြီး ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့ ၀ါသနာနဲ့တစ်ထပ်တည်းကျတယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
လေးစားပါတယ် lulu ရယ်။ တောင်ကြီးရောက်ရင် လာလည်ရင် ချက်ကျွေးရမယ်နော်။ လာနိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားပါ့မယ်။
ဒါမဲ့ စားဖိုမှူးကလုလု မဟုတ်ကြောင်းရိုးသားစွာဝန်ခံပါရစေ
အစ်မ မနော ပြောခဲ့တာတွေကို ဟိုစားဖိုမှူးအစ်မ ကို ပြန်ပြောပြ
လိုက်ပါ့မယ် အားတက်သွားအောင် ပေါ့
အမှန်တော့… ဝါသနာပါရင် စားဖိုဆောင်အလုပ်က ပျော်စရာကြီး…
ကိုယ့်လက်ရာကို လူတွေအားရပါးရ စားမြိန်ကြတာကြည့်ပြီး အတော်ပီတိဖြစ်ရတယ်…
ဟုတ်တယ် ဦးကျောက် ရေ
စေတနာထားချက်ပြုတ်ပေးတဲ့ အတွက် ကုသိုလ်လဲရ မှာမို့ ..
မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်ပါလို့ ဂုဏ်ယူ အားပေးပါကြောင်း
လုလုရဲ့ စားဖိုမှူးအစ်မ ကိုပြောပေးနော်…
ထမင်းသုံးနပ်ကျွေးတဲ့ စက်ရုံဆိုတော့ တော်တော်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်မယ်…
တကယ်မလွယ်တဲ့အလုပ် ပါ အဲ့လောက်
ကိုယ်တိုင်ကတော့ ခုတလော ဖဘမှာ အစားအသောက်ပုံတွေတွေ့ရင် မျက်စိနောက်တဲ့ရောဂါရနေတယ်…
အဲ့ပုံတွေမြင်ရင် တစ်လ ကိုးသီတင်း ဧည့်သည်လုပ်ချင်တယ်ဗျာ.. :s:
သကြားမင်းက လူ့ ပြည်ကအစားအသောက်လည်း
ကြိုက်လိုက်တာပဲပေါ့ မလွယ်ဘူး နတ်သကြားတွေများ
တောင်ကြီးရောက်ရင်တော့ ဆိုင်သွားစားစရာမလိုတော့ဘူး ရွာသူ လက်ရာဘဲ မြည်းရင်းစားရတော့မယ်လေ